निःशुल्क उच्च–गुणस्तरीय ख्रीष्टियान साहित्य | रेमा साहित्य वितरकहरू
यी निःशुल्क पुस्तकहरू गहिरो, सरल, व्यवहारिक र जीवन–परिवर्तनमुलक छन् । हाम्रो निःशुल्क ख्रीष्टियान ऋृङ्खलामा सबै पुस्तकहरू पढ्नुहोस् र परमेश्वरको आफ्नो खोजमा ज्यादा सहायता प्राप्त गर्नुहोस् ।
तपाईंको जग कति पक्का छ ?
यो पुस्तकले तपाईंलाई मानिसको निम्ति परमेश्वरको योजनालाई जान्न सहायता गर्नेछ । यसले तपाईंलाई प्रचुर र अर्थपूर्ण ख्रीष्टियान जीवनको निम्ति ठोस आधार हासिल गर्न सहायता गर्दै, दुवै नयाँ अनुभवी ख्रीष्टियानहरूको निम्ति अत्यावश्यक चार मुख्य अनुभवहरूलाई खुल्ला पार्दछ ।
म कसरी परमेश्वरसितको मेरो सम्बन्धलाई गहिरो पार्न सक्छु ?
प्रत्येक बिहान प्रभुसित एक्लै समय बिताउनुले परमेश्वरसितको हाम्रो सम्बन्ध मीठो र व्यक्तिगत हुने तुल्याउँदछ । यो समयले हामीलाई हाम्रो ख्रीष्टियान जीवनमा प्रगतिमय र गतिशील तरिकामा हाम्रो ख्रीष्टियान जीवनमा बढ्ने तुल्याउनेछ । यो पुस्तकलाई पढेर प्रभुसित यी समय पाउनु कति सरल छ भनी पत्ता लगाउनुहोस् ।
के तपाईंले ख्रीष्टका असीमित अनुभवलाई खोजी गर्नुहुन्छ ?
हामीले पहिला हामी यो “सर्व–सम्मिलित” ख्रीष्टको अनुभवभित्र प्रवेश गर्न सक्नुअघि ख्रीष्ट कति असीमित हुनुहुन्छ भनी देख्नैपर्छ । यो पुस्तकले तपाईंलाई देख्न र प्रवेश गर्नलाई सहायता गर्नेछ । व्यवस्था विवरणको यो व्याख्यामा, कसरी कनानको असल भूमि ख्रीष्ट उहाँका विश्वासीहरूका लागि को हुनुहुन्छ भन्ने बारेको एउटा तस्वीर हो भनी देख्छौं ।
किन परमेश्वरको अनन्त उद्देश्यले मसित उद्देश्य राख्दछ ?
सम्पूर्ण बाइबलले परमेश्वरको अनन्त उद्देश्य र कसरी उहाँले यसलाई परिपूर्ण गर्नुहुन्छ भनी व्याख्या गर्दछ । एउटा उदेकलाग्दो तथ्य यो हो कि परमेश्वरले उहाँ स्वयम्द्वारा यो योजना परिपूर्ण गर्न चाहनुहुन्छ । उहाँले मानिसलाई समावेश गर्ने निर्णय गर्नुभयो । ख्रीष्टमा भएका विश्वासीहरूझैं हामी सबै परमेश्वरको योजनाको भाग हौं । त्यसैले, कसरी तपाईं यो योजनामा सहभागी हुन सक्नुहुन्छ ? किन हामी उहाँको उद्देश्यमा मुख्य बिन्दु हौं भनी देख्नलाई यो पुस्तक पढ्नुहोस् ।
केवल सही र गलतद्वारा जिउनुबाहेक अझ बढी केही छ ?
समाजले हामीलाई सही र गलतको सिद्धान्तद्वारा हामी स्वयम्लाई आचरण गर्न सिकाउँछ, तर यसको बारेमा बाइबलले के भन्दछ ? बाइबलले हामीलाई हामी जिउन सक्ने उच्च सिद्धान्तः जीवनको सिद्धान्त देखाउदछ । परमेश्वरले हामीले परमेश्वरको अनन्त योजनाको परिपूर्ण गराइको निम्ति यो सिद्धान्तद्वारा जिएको चाहनुहुन्छ ।
परमेश्वरमा जारी राखिएको बढाइको निम्ति सारगत कुराहरू थाह गर्नुहोस्
जीवनमा बढ्नको निम्ति, हामीले जीवन के हो, यो कहाँबाट आउँछ र यो जीवनलाई कसरी पाउने भनी जान्नैपर्छ । जवाफहरू बानिबेहोराको सुधार, सिर्फ ज्ञानको वृद्धि, वा वरदानहरू या शक्तिमा निर्भर हुँदैन । जीवनमा हुने बढाइको निम्ति बुझाइ र अगुवाइ हासिल गर्नुहोस् ।
के परमेश्वरले मण्डलीलाई हामीले गरेभैंm भन्दा भिन्न तरिकाले हेर्नुहुन्छ ?
जब हामीले “मण्डली” शब्द सुन्छौं हामीले हाम्रो सोच मानव धारणाहरूले परिपूर्ण छ भनी महसुस नगरौंला । यो पुस्तकले तपाईंलाई कसरी परमेश्वरले मण्डलीलाई हेर्नुहुन्छ भनी देखाउने कामद्वारा तपाईंका सोचहरूलाई नवीकरण गर्नुहुनेछ । बाइबलले हामीलाई मण्डलीसम्बन्धी परमेश्वरको परिपेक्ष हामीलाई देखाउने चार अद्भूत बुझाइलाई सीमित नगर्नुहोस् । हामी तपाईंलाई मण्डलीलाई महिमामय तरिकामा हेर्नलाई आमन्त्रित गर्छौं ।
हाम्रा वितरित पुस्तकहरूका लेखकहरू वाचमेन नी र विटनेस ली हुन् । यहाँ वाचमेन नी र विटनेस लीका सेवकाइबारे अझ बढी पढ्नुहोस् ।